esteem-myanmar - Steem - GoldVoice.club
← # esteem-myanmar
ဤနေရာတွင် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ၇ ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်းဆိုပြီးရေးသားလေ့ရှိကြတယ်။ ဟိုအရင်ခေတ်က‌ေနခုအချိန်အထိပေါ့။ ဟိုတစ်ချိန်ကတော့သတင်းစာဆိုတာ အားကိုးစရာပါ။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ သတင်းစာကဖတ်သူနည်းပါးလာပြီး။ အကြောင်းရှိမှ ကြော်ငြာတာ၊ ဖတ်တ…
How to Make Beautiful Paper Boxes
အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ကုန်ကြလေပြီ။ Steem ရော Hive ရော သေချာရေရာ နားမလည်ပါဘူး။ စာရေးတာလောက်တြောဖြဈ်ယ်လေ။ စာရေးတင်ရရင် ချီတက်နေရုံပါပဲ။ ဆိုတော့ကာ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အများလုပ်သလို လိုက်လုပ်ရမှာပါပဲ။ အများက Hive ဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း Hive ရမှာပဲ…
ဒီနေ့ ပိုစ့်ကတော့ ဘယ်သူ့ အတွက်၊ ဘယ်သူ့ အကြောင်း၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပေ။ ကိုယ့်ကို သတိပေးလိုခြင်းကြောင့် ရေးရခြင်းသာ ဖြစ်၏။ အခြားတော့ မဟုတ်ပေ။ ကိုယ့်ကို လူလွတ် တယောက်ဆိုတာကို မေ့သွားပြီ စိုးသောကြောင့် သတိပေးရခြင်း ဖြစ်၏။ အမ နှစ်ယောက်လုံးက အဝေးမှာ တာဝန်ကျန…
တနေ့ တနေ့ ဘာရေးလို့ ရေးရမယ်မှန်းကို မသိပေ။ steem ဈေးကလည်း ကျ။ ရေးစရာကလည်း ရှားနှင့်။ ဒီကြားထဲ covi 19 ကလည်း တမှောင့်နှင့် တွေးရင်း ပူရ စိတ်ရှုပ်ရ။ ဒီအချိန် steem ဈေးလေးများ တက်လိုက်၊ တက်လာလျှင် ဆိုပြီးတော့လည်း တွေးနေမိပြန်၏။ steemit ၏ ရှေ့ရေးကလည်း ဘာတွေ ဆ…
လူတော်တော်များများဟာ လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာ ကိုနားမလည်ကြဘူး။ ပိုက်ဆံမရှိလို့သာ ငြိမ်နေကြပေမယ့်။ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိတာနဲ့ လိုချင်တာတွေပြေးဝယ်ကြတာပဲ။ လိုချင်ပဲဝယ်မှာပေါ့လို့ ပြောကြမှာပါ။ အဲတာကပဲ လူတွေကိုဆင်းရဲစေပြီး လူမွေးလူတောင် မပ…
Electricity (Final Chapter)
မီးဆွဲစက်လေးက သိပ်မကြီးလှပေမယ့် လေးတာတော့ အတော်လေး လေး၏။ ဆိုင်ကယ်နှင့် သေချာလည်း ထိန်းပြီး သယ်လာရ၏။ မီးဆွဲစက် ရလာတော့ အဆင်ပြေ မပြေ စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့က လိုသေး၏။ သို့နှင့် အိမ်သစ်ကို မီးစင်ပေးသည့် ညီလေးကို အနှီ စက်ကို ပြပြီး မေးကြည့်ရသေး၏။ သူက ရတယ် အဆင်ပြေတယ်…
ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ‌apk လေးထဲထည့်ပြီး တောင်လုပ် မြောက်လုပ် တောင်ချိန် မြောက်ချိန် လုပ်ကြည့်မိတာ မူရင်းပုံနဲ့ အတော်လေးကွာသွားသဗျ။ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဆိုးဘူးဗျ။ သိလို့တော့ မဟုတ်ဖူး။ ကလိလို့ သိတာ။ ဆိုတော့ကာ နောက်လည်း အခုလိုပဲ ပုံတွေလျော…
စစ်ကိုင်း-ကျောက်တာ လမ်းဘေး ရှင်သီဝလိတောရကျောင်းတိုက်အတွင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ ဓမ္မစေတီတော်များဖြစ်ပါတယ်။ ကြုံကြိုက်ခဲ့ရင်ဖြင့် ဝင်ရောက်ဖူးမျှော်ကြည်ညိုသင့်ပါတယ်။ နေ့စဉ် နေ့တိုင်းလည်း လာရောက်ဖူးမျှော်ကြတဲ့သူတွေများပြားလာပါတယ်။ လာရောက်သူတွေကိုလည်း အလှူရှင်တွေက နေ…
Beautiful Paper Wall Hanging
တပေါင်းလပြည့်ကျော်2ရက်ည လမင်းကြီးက
စာရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ အချိန်လွန်သွားတဲ့နေ့ရက်က (၃)ရက်တောင်ရှိသွားပါပကောလား။ နေ့စဉ်အလုပ်ကို အလိင်မီအောင်လုပ်နေရတာဖြစ်လေတော့ အချိန်မီ စာမရေး ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာ အဆန်းတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတဲ့သူတွေချည်းပဲလေ။ မလုပ်မရှုပ်ဆိုတာက အ…
My favourite battle for 07/03/2020
တကယ်ပင် ထူးပါသည်။ တကယ်လည်း ဆန်းပါသည်။ အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်၊ ကမ္ဘာမှာ မရှိတာတွေ ရှိပါသည်။ မတူညီတာတွေ များပါသည်။ အဲဒီလို မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိနေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်တော်မွေးဖွား ကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါသည်။ သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အခါမှာလည်း …
My favourite battle for 03/03/2020
အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်နေသော ၂၀၀၈ ခြေဥ
အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်မှုကို Conflict ဟူသော အင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းကို ကျွန်တော်ရေးသားခဲ့ဖူးပါသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စတွင်လည်း Conflict တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေပါသည် ။ ယင်း…
ဒီနေ့ဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ (၅၈)နှစ်မြောက် တောင်သူလယ်သမားနေ့ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဒီပို့စ်ကို တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားနေ့ကို ကြိုဆို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
My favourite battle for 01/03/2020
တစ်နေ့တစ်နေ့ စာရေးတင်နိုင်ဖို့အရေး စဉ်းစားတွေးတောနေရတာ တစ်ခါ တစ်ခါ အတွေးလွန်နေတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တောင် မေ့မေ့သွားသဗျ။ တွေ့ကြုံလာတဲ့ အြဖစ်အပျက်လေးတွေ သွားလာ လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက် အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ခေါင်းထဲမှာမှ…
My favourite battle for 29/02/2020
ဟေမန္တဆောင်းဥတုကလည်း လက်ပြနှုတ်ဆက်ကာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမျှ ပူပြင်းခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရာသီက အစားထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ အတန်းကျောင်းများလည်း အတန်းတင်စာမေးပွဲ စစ်ပြီးသကာလ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နွေရာသီကျ…
ခုရက်ပိုင်း ပြောင်းလဲမှုတွေကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ရင်း ကွန်မြူနတီတွေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး တွေ့တာလေးတွေရေးလိုက်မိပါတယ်။ ဘယ်ကွန်မြူနတီတွေမှာပဲရေးရေး မိမိ wall ပေါ်မှာ Blog နဲ့ posts ဆိုပြီး နှစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ Blog မှာကတော့ မိမိ ပုံမှန်စာတင်သလိုမျိုး တင်ရင် တွေ့နိုင…
Community အကြောင်း တစေ့တစောင်း
This post is about the comminity. We are currently testing the community feature. Thanks to all.
Steemit မှာ ကွန်မြူနတီတွေကို စတင် အသုံးပြုလို့ ရနေပါပြီ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ကွန်မြူနတီဆိုတာ facebook က ဂရုတွေလိုမျိုးပါပဲ။
ကိုယ်ရေးလိုက်တာကို ဂရုထဲမှာ ကြည့်မှပဲ မြင်ရပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ profile မှာ မပေါ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ tag တွဲထားရင်တော့ အဲဒိ tag ကို စောင့်ကြည့နေတဲ့ ginabot လိုမျိုးတွေကတော့ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ သေဘာပါ။ Facebook group လို ပုံံစံမျိုးများလား။ ဘာတွေများ ထူးခြားလာမလဲ။ ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနွေကို မျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦး။
Peace Event 2020 in Sagaing, Myanmar
ဒီနေ့တော့ အခြားစာရေးစရာမစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ် မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်းလေးပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သတင်းရေးတဲ့ သတင်းထောက်မဟုတ်ပဲ အချင်းချင်း သတင်းပေးတဲ့သဘောလေးပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့ ဆိုတော့ 27-2-2020(ကြာသပတေး)နေ့၊ နံနက် (၈)နာရီအချိန်က စတင်လို့ Peace Event…
My favourite battle for 27/02/2020
မင်္ဂလာရှိသောအချိန် မင်္ဂလာရှိသောနေ့ မင်္ဂလာရှိသော အိမ်တော်မင်္ဂလာ တိုက်တော်မင်္ဂလာ ဆိုင်တော်မင်္ဂလာ မှာ ရှိနေကြပါကုန်သော ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကောင်း နေ့မြတ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ ဘာမှမဟုတ်ဘူး စာရေးစရာ အချိန်မရတော့လိုံ တွေ့ရာ ရေးမလိ…
My favourite battle for 26/02/2020
ဘီယာကို ကျနော် fourth year မှာ စသောက်တတ်၏။ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး အကင်သွားစားရင်း သောက်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်၏။ တခွက်ထဲသာ ဖြစ်၏။ တခွက်ထဲနှင့် တော်တော်လေး မွတ်သွား၏။ ထို့နောက် တလကို တကြိမ်လောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ စုစုပြီး သွားသွားသောက် ဖြစ်ကြ၏။ ကြာလာတော့ တခွက်မှသည် …
ကျွန်‌တော်သည် ကလေးငယ်များကို ချစ်တတ်
သူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ steemit အဖွဲ့သားများဖြစ်သည့် ကိုဟိန်း တွင် ချစ်စရာကောင်းသော
သားဦးလေး မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုအပြင်
Who gives me blessing?
This is very rare and incredible post for me. If you takesalook at my image you will know what I mean. 3728 spt. I never got this much as I remember. Thanks to all who support me. This can give me strength to make more battles, more posts.
နေထွက်ချိန်လား? နေဝင်ချိန်လား? ဆိုတာကို မသိနိုင်သေးဘူး။
လူအဖြစ်နဲ့ လူ့ဘဝကို ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ဘာ့ကြောင့် လူ့ဘဝက မြင့်မြတ်မှန်း ရေရာသေချာ မသိနိုင်သေး။
လူ့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်က ဘာလည်းဆိုတာကို စဉ်းတောင်မစဉ်းစားခဲ့မိသေး။ ‌ဘဝတစ်ခု ချုပ်ငြိမ်းဖို့ ထွက်သက် ဝင်သက် ရပ်တန့်ပြီး သေဆုံးခြင်းက လူတွေရဲ့ပန်းတိုင်လား? ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်လား? သေချာတဲ့အဖြေ ရေရာတဲ့အဖြေ မရှိသေး။
Bath (Chapter 2)
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ မဆို ရေချိုး နိုင်သွားသည့် အကြောင်းအရင်းက လွန်ခဲ့သော (၂) နှစ်က new year trekking ခရီးစဉ် ကြောင့်ဟု ဆိုရပေလိမ့်မည်။ trekking သွားတိုင်း ပထမ တရက် လျှောက်ပြီး ညအိပ်မည့် ရွာ ရောက်သည်နှင့် ကျနော် ရေချိုးလေ့ ရှိ၏။ ကျနော် အပြင် အချို့ သူငယ…
ဖေဖော်ဝါရီရဲ့ အမှတ်တရ နေ့စွဲများ
ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ ရက်စွဲများအနက် 12,13,14
12 ရက်က ပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်သည်။
Steem ဈေးက မနေ့က အတိုင်းပင် ငြိမ်နေသေး၏။ market cap ကို သိပ်မကြည့်တတ်သည့် ကျနော့်အဖို့ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်လာမည်ကိုတော့ မပြောတတ်သေးပေ။ မည်သို့ပင် ဆိုစေ မနေ့က ကိုဟင်၏ ပြောစကားအရ steem ဈေး ကောင်းလာနိုင်သည်ဟု မျှော်လင့်ရ၏။ ဈေးက လက်ရှိအချိန်ထိတော့ မနေ့က ဈေးတန်းကို …
ဆောင်းနှင်းမြူတို့ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ် ကုန်ကြသည်နှင့်အမျှ နွေ၏သရုပ်တို့သည် ပီပြင်လာကြလေကုန်သည်ဖြစ်ရာ နွေရာသီ၏အစတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတတ်သော မီးလောင်မှုများကိုလည်း ကြား မြင် လာရ‌သည့်အတွက် မီးဘေးကာကွယ်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်သင့်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း လမ်းကြုံလို့ နှိုးဆ…
ကဲ ကဲ ဒီနေ့ကတော့ ဘာနေ့လဲဆိုတာကို အထွေအထူး‌ပြောနေစရာမလိုလောက်ဘူး ထင်တယ်။ ယနေ့ခေတ် လူငယ် လူရွယ်တွေသာမက လူလတ်ပိုင်း လူကြီးပိုင်းတွေတောင် သိနေကြတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ ဘတ်လဘိုင်ဒေး အဲ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး ဘယ်လိုနဲ့ရောက်လာသလဲတော့ မသိဘူး။ လူငယ် လူရွယ် လူလတ် လူကြီးမကျန် တည်းခိုခန်း‌ကို အလည်အပတ်သွားကြတဲ့နေ့ဖြစ်နေခဲ့သလိုပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင် လူငယ် လူရွယ် လူလတ် လူကြီး အရွယ်စုံ အကျင့်စာရိတ္တကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့နေ့တစ်နေ့လို့ပဲ မြ…
မနေ့က Link2SD app အကြောင်း ပြောပြပြီးနောက် ဒီနေ့ သူနှင့် ပုံစံတူသည့် app လေး တခုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးလို၏။ App2SD pro ဖြစ်၏။ app (2) ခုလုံး အခြေခံအားဖြင့်တော့ ဆင်တူကြ၏။ system app တွေကို uninstall လုပ်ခြင်း၊ freeze (disable) လုပ်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်၏။ …
ဒီနေ့တော့ app လေး တခု အကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပေးလို၏။ အမှန်တော့ ထို app ကို ယခင် Phone တွေမှာတုန်းက အသုံးပြုခဲ့ဖူး၏။ တိတိကျကျ ပြောရလျှင် ပထမဆုံး ကိုင်ဖူးခဲ့သည့် Huawei U8825D လေးမှာ သုံးဖြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ sony M4 မှာလည်း သုံးဖူး၏။ သို့ပေမယ့် sony မှာတော့ ထို…
ML again (Chapter 1)
ဒီနေ့တော့ Magisk Module တွေ အကြောင်း ပြောတာ ခဏ နားဦးမည်။ အမှန်တော့ phone ကလိသည့် အပြင် အခြား လည်း လုပ်၏။ ဂိမ်းဆော့ခြင်း ဖြစ်၏။ သိသည့်တိုင်း Mobile Legend ပေါ့။ phone အသစ် ဝယ်ဝယ်လာခြင်းတုန်းက app တွေ သွင်းတော့ ML ဂိမ်းက ထိပ်ပိုင်း app စာရင်း ဝင်၏။ အရေးကြီး…
နှလုံးသားကိုရော ကျွဲခတ်လို့ မရဘူးလား။
Diamond III has been reached
This is the second time I can reach to diamond III. This is really hard for me to reach there because my cards are only at rare lvl 4. In diamond I seealot of players with at least lvl6rare or lvl 8 common.
Now I know how to add images from pho…
Magisk's Modules (Chapter 2)
Viper4 က တကယ် သိသာ၏။ phone ထဲမှာ original ပါသည့် အသံပိုင်းဆိုင်ရာကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြောင်းလဲ ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်၏။ တကယ့်ကို အံအားသင့်ဖွယ် ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်၏။ headset, speaker, Bluetooth, usb အစရှိသဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး ပြောင်းလဲလို့ ရသည့် settin…
လို့ အိမ်ပြန်ချိန်နီးပြီပေါ့။ သို့သော်လည် ပညာရေးဝန်ကြီးက ကျောင်းဖွင့်သည့်ရက် တစ်လထပ်တိုးသဖြင့် ပြဿနာအနည်းငယ်တက်ခဲ့သည်။ ယခုတော့
MIUI DOWNGRADE (Final Chapter)
Magisk ရသွားပြီးနောက် အခြား လိုအပ်သည်များကို ဆက်လုပ်ရ၏။ app တွေ install လုပ်ရ၏။ app တွေကိုတော့ back up မယူထားပေ။ ပြန် down လိုက်လို့ ရသည်ကိုး။ အရေးကြီး app တွေကို အရင် down ပြီး သိပ်အရေး မကြီးသည်များကို ပြီးမှပဲ ဖြည်းဖြည်း ပြန်လိုက် သွင်းယူတော့မည်။ ညနေ (၆…